‘हेपाई’ सहन नसक्दा यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्कीले गरे कहालीलाग्दो नरसंहार! ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > ‘हेपाई’ सहन नसक्दा यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्कीले गरे कहालीलाग्दो नरसंहार! !
admin September 11, 2021 समाचार 0
ह’त्या ग’रि’एका तेजबहादुरले ‘हेपेका कारण’ आफुले आवेगमा ह’त्या गरेको आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन् । तेज बहादुरका दुईभाई छोरा विदेशमा छन् । लोकबहादुरलाई आफु विदेश जान नसकेकोमा ‘हिनतावोध’ थियो । स्थानीयहरुका अनुसार तेजबहादुरमा अरुलाई हे’प्ने ‘प्रवृत्ति’ थियो । तेजबहादुरको प्रवृत्ति लोकबहादुरलाई मन परेको थिएन । ‘हेपाई’ खप्न नसकेर लोकबहादुरले तेजबहादुर परिवारको विनाश गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
संखुवासभा घटनाः परिवार नै रित्तो बनाइदिने यिनै हुन् पक्राउ परेका भतिज
पक्राउ परेका भतिजको चकित पार्ने यस्तो बयान : अति भएपछि सहनै सकिन अनि सिकिदिए